ỌKỤ AGBAPỊALA ỤMỤAKA ABỤO – hoo!haa!!
Na ngwụchaa izu ụka gara aga ka anyị na-anụ na ọkụ gbagburu ụmụaka abụọ ma merụkwa ọtụtụ ndi ọzọ ahụ na obodo ana-akpọ Mkpong Udong dị na okpuru ọchịchị ime obodo Mbo dị na steti Akwa Ibom. Mkpong Udong bụ ndi eji ịkụ ọkụ azụ nakwa ọrụ ugbo were mara. Ganye na mgbe anyị na-eziga akụkọa na ụlọ mgbasa ozi, anyị amabeghị kpọm kwem ihe butere ọkụ ọgbụgbaa.
Onye isi oche otu Ibaka Development Organization IDO n’aha nkenke bụ Chief Ukutudo kwara akwa arịrị ma kwue na ọkụ ọgbụgbaa mebiri ihe di nde kwuru nde naira ma rikwa isi ndi mmadụ. Ọ sịrị: “ọkụ ọgbụgbaa mebiri ọtụtụ ụlọ nakwa ngwa ọrụ dị iche iche eji akụ ọkụ azụ bụ nke ruru ọtụtụ nde naira”. Ọgara n’ihu kwue si: “anyị na-ariọ goment steti nakwa ndi otu enyem aka ndi ọzọ ka ha gbatara ndi nkea metutara mkpu enyem aka” n’okwu ya, ndi nkea metụtara karia bụ ndi na-akụ ọkụ azụ nakwa ndi ọrụ ugbo.
Aka na-achị ọchịchị ime obodo Mbo bụ Asụkwọ Eyo kwakwara akwa arịrị kwue sị na ọkụ ọgbụgbaa ewterela ndi obodoa nnukwu ihe nhịa ahụ, wee kpọkuekwa ndi ọrụ gbata nye aka abụghị nke gọmenti ka ha were ọsọ were ije bia nyere ndi Mkpong Udong aka n’ihi na ọkụ ọgbụgbaa ebuterele ọtụtụ n’ime ndi obodo ahụ nsogbu enweghị ebe obibi. Okwuru si: n’otu aka ahụ, “anyị na-ayọkwa ndi ọrụ gbata nye aka nke gọment etiti nakwa nke steti tinyekwara ndi nkịtị ihe gbasara ọdị mma ndi mmadụ na-emetụ n’obi ka ha gbatara anyị mkpu enyem aka iji benata ntarama ahụhụ ndi ọkụ ọgbụgbaa metutara na-ata ugbua.”
Ka ihe si gbata kwụrụ kita, aka na-achi steti Akwa Ibom bụ Udom Emmanuel, agala njem nleta ma tasikwa ndi nkea metutara obi. Ọ yokwara Chukwu ka ọ tasie ndi ụmụaka ha nwụrụ n’ihe mberedea obi. Onye nọchitere anya gọvọnọ Udom na njemaa bụ ode akwụkwọ stetia bụ Emmanuel Ekuwem. Emmanuel Ekuwem na onwe ya bụkwa onye okpuru ọchịchị ime obodo Mbo. O kwere nkwa na-ya ga enye aka ihụ na ndi nkea metụtara ga-enwete enyem aka ebe ha ga na edobekwa isi ha.
Previous Post: TIGBUO ZỌGBUO DỊ N’ETITI NDI NA-ACHỊ EHI NA NDI ỌRỤ UGBO
Next Post: NDI NCHE EHI AMALITEKWALA IBU AGHA NA STEETI BENUE
Chai! Chineke meere anyi ever. Ka mkpuruobi umuaka a zuru ike na ndokwa, amen.
Chai! Chineke meere anyi ebere. Ka mkpuruobi umuaka a zuru ike na ndokwa, amen.